शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बिषयमा ओली सरकार असफल ! - शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बिषयमा ओली सरकार असफल !
शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बिषयमा ओली सरकार असफल !
२०७6, २ बैशाख, 06:10:58 PM
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले वर्तमान सरकारले वर्ष २०७५ मा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दे काग्रेसले दुई तिहाईको सरकासंग काम गर्ने प्रसस्त आधार र वातावरण हुदा पनि जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाएको हो ।
शक्ति विकेन्द्रीकरण र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका क्षेत्रमा पनि सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको काग्रेसको आरोप छ । त्यस्तै वर्ष ०७५ मा संवैधानिक परिषद्लाई कार्यपालिका झै एक पक्षीय बनाउने दुस्प्रयासलाई गति दिएको , सरकारको अपरिपक्व र अदूरदर्शी शैलीका कारण अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छविमा ह्रास आएको काग्रेसको ठहर छ ।
त्यस्तै शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बिषयमा पनि सरकार चुकेको काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मेवार भएर देशको नेतृत्व गर्न आग्रह गरे । अघिल्लो वर्ष जे जस्तो भए पनि नयाँ वर्षमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति, जिम्मेवार व्यवहार गर्न उनले सुझाव दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीले केटाकेटीलाई ढुंगा हान्न उक्साएको आरोप समेत लगाए । आफ्ना कार्यकर्ता अरिंगाल नबनेपछि प्रधानमन्त्रीले केटाकेटीलाई ढुंगा हान्न उक्साएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा पनि सत्तारुढ दलको कार्यकर्ता अरिंगाल नबनेको भन्दै धन्यवाद दिए ।
भ्रष्टाचार र कुशासनको यो दुर्दशा ! कहाँ छैन् भ्रष्टाचार ? २ लाख बिगाहा जग्गा कब्जामा
कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री ताम्राकारको निधन